မကြာသင့်ဘဲ ကြာမြင့်နေတဲ့ Danny Fenster အမှု (ရှေ့နေဦးသန်းဇော်အောင်)
အမေရိကန်သုံးအီဒီယံ မကြေးမုံရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ
၂၂ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၁
(Zawgyi / Unicode)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရက်ပေါင်း ၁၂၀ ကြာထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အမေရိကန်သတင်းသမား Danny Fenster ရဲ့ အမှုစစ်ဆေးမယ့်ကိစ္စ မလိုအပ်ဘဲ ကြာမြင့်နေပြီး သူ့ အတွက် နစ်နာမှုတွေ ကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်လို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ Danny Fenster ကို ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့ တနင်္လာနေ့က ရုံးထုတ်စဉ်မှာ အင်တာနက်ဗွီဒီယိုကနေ တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ရှေ့နေ ဦးသန်းဇော်အောင်ကို မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က အမေရိကန်သတင်းသမား Danny Fenster ရဲ့ ဗွီဒီယို ကွန်ဖရင့်နဲ့ ရုံးချိန်ကို တရားသူကြီးနဲ့ ပန်းပဲတန်း ရဲစခန်း အရာရှိ တို့က အင်တာနက်ဗွီဒီယိုတွေနဲ့ အသီးသီးတက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် တရားလို ဥပဒေအရာရှိတော့ တက်ရောက်တာ မတွေ့ရဘူးလို့ ရှေ့နေ ဦးသန်းဇော်အောင်က ပြောပါတယ်။ Danny Fenster ကတော့ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲကနေ ထောင်အရာရှိတွေနဲ့အတူ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေ တွေ့ခဲ့ပြီး သူနဲ့ စကားပြောခွင့်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေကို ဦးသန်းဇော်အောင်က ဗွီအိုအေကို အခုလိုပြောပါတယ်။
ရှေ့နေဦးသန်းဇော်အောင် ။ ။ အဲဒီတော့ Danny Fenster ရဲ့ အခြေအနေက သူကတော့ မျက်နှာ နည်းနည်းတော့ နွမ်းလျနေတယ်ပေါ့။ နောက်တခါ ဆံပင်ကလည်း ရှည်သွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ တရားသူကြီးက ရုံးချိန် ကိစ္စ ပြောပြီးသွားတော့ ကျနော် သူ့ကို မေးလိုက်တယ်။ မင်း ကာကွယ်ဆေး ရပြီးပြီလား ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ မရဘူးလို့ ပြောတယ်။ ကျနော် သေချာအောင် နောက်တခါ ထပ်မေးတယ်။ ကာကွယ်ဆေး မရဘူး။ နောက်တခါ သူ နေရ ထိုင်ရ မကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ဟာ I am not feeling well. ဆိုတဲ့ဟာ ကို သူပြောတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူ့အမှု အခြေအနေ ဘာလဲ ဆိုပြီး မေးတဲ့ အခါကျတော့ ကျနော်ကတော့ ရှင်းပြတယ်။ အင်းစိန်ထောင်ကနေ ပိတ်ထားတယ် အပြင်လူတွေ၊ သူ့အမှုတင် မကဘူး တခြား လူတွေလည်း ၀င်လို့ မရသေးတဲ့ အတွက် ဒါတော့ နည်းနည်းလေး ကြန့်ကြာနေတာကို ကျနော် ပြောပြတယ်။
ပြောပြလိုက်တော့ နောက်ပိုင်း သူ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဒီဟာကို သူဘာမှ ထပ်မပြောချင်တော့ဘူး ပေါ့နော် ငါ ဘာစကားမှ ပြောစရာ မရှိတော့ဘူးလို့ သူပြောတယ်။ မနေ့ကတော့ အဲလောက်ဘဲဗျ။
အင်ကြင်းနိုင်။ ။ သူ့ကို တရားစွဲထားတဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြပေးနိုင်မလား။
ရှေ့နေဦးသန်းဇော်အောင် ။ ။ သူ့ကို တရားစွဲတဲ့ဟာက Myanmar Now က တာဝန်ရှိသူ တယောက် အနေနဲ့ တရားစွဲထားတာဗျ။ ၅၀၅- က နဲ့။ အဲတော့ Myanmar Now က ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် နောက်ပိုင်းမှာ ရပ်ဆိုင်းဖို့ ကြေညာခဲ့တဲ့ အထဲမှာ Myanmar Now ပါတယ်။ သို့သော် ဒီ Danny Fenster က Myanmar Now မှာ မလုပ်တော့တာက အဖမ်းမခံရခင် ၈ လ- ၉ လလောက် ကတည်းက Myanmar Now ကနေ အလုပ်ထွက်ပြီးသား။ အဲဒီတော့ Frontier Myanmar ကို ပြောင်းလုပ်နေပြီ။ အဲဒီတော့ သူ အဖမ်းခံရချိန်မှာ Frontier Myanmar မှာ သူလုပ်နေတာ ၉ လလောက် ရှိပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ကို တရားစွဲတယ်၊ ဖမ်းတယ်။ အဲတော့ တိုင်စာမှာကလည်း Myanmar Now က တာဝန်ရှိသူ တယောက် အနေနဲ့ သူ့ကို ဖမ်းတာပေါ့ဗျာ။ မှားပြီး ဖမ်းသွားတယ်ပေါ့။
အင်ကြင်းနိုင်။ ။ အဲတော့ Myanmar Now နဲ့ ပတ်သက်လို့ စွဲထားတဲ့ အမှုကို ဘယ်လို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရလဲ။
ရှေ့နေဦးသန်းဇော်အောင် ။ ။ ဘယ်လို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရမလဲ ဆိုတော့ ဒီအမှု တိုင်စာမှာ ဘယ်သတင်းကို ရေးလို့၊ ဘာလို့ ဆိုတာ တခုမှ မပါဘူး။ တိုင်စာမှာက အကျဉ်းပြောရရင်တော့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဌာနက ၁/၂၀၂၁ နဲ့ ကြေညာထားတဲ့ Myanmar Now သတင်းဌာန ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး နည်းပညာ ရေးသားထုတ်လွှင့်ခြင်း မပြုရန် ကြေညာခဲ့တယ်။ အဲလို ကြေညာတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ You Tube တွေ Twitter တွေနဲ့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်တယ်။ CRPH တွေ ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုးတို့ ရပ်တည်မှု သတင်းတွေ၊ အဲလို သတင်းတွေကို ထုတ်လွှင့်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ပြည်သူ လူထု ထိတ်လန့်စေရန် ကြံရွယ်ပြီး ထုတ်လွှင့်တယ်။ အဲဒါကြောင့် Myanmar Now သတင်း ဌာန တာဝန်ရှိသူများ အပေါ် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ အရ အရေးယူ အမှုဖွင့်ရန် တိုင်ကြားတာ။ ဒါဘဲ။
အဲဒီတော့ အဓိက သည် Myanmar Now က တာဝန်ရှိသူ အရေးယူဖို့ တိုင်ကြားတာ။ Danny သည် Myanmar Now နဲ့ မပတ်သက်ခဲ့တာက ၈ လ၊ ၉ လလောက် ရှိသွားပြီ။ သူ အဖမ်းမခံရတဲ့ အချိန်ထိ။ သူက Frontier Myanmar ကို ပြောင်းပြီး အလုပ်လုပ်နေပြီ။ အဲဒီ အချိန်မှာ ဖြစ်တဲ့ဟာကို မဆိုင်ဘဲနဲ့ သူ အရင်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ဌာန အဟောင်းက ဟာကြောင့်ဆိုပြီး စွဲတာပေါ့နော်။
အင်ကြင်းနိုင်။ ။ Frontier Myanmar သတင်းဌာနမှာ လုပ်နေတဲ့ အယ်ဒီတာတယောက်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ လ ဆိုတာ စစ်အာဏာမသိမ်းခင် အချိန်တုန်းက Myanmar Now မှာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးထားတာဆိုတော့ Danny Fenster အတွက် နစ်နာတဲ့သဘောဖြစ်မနေဘူးလား။
ရှေ့နေ ဦးသန်းဇော်အောင်။။ နစ်နာတယ် ဆိုတာကတော့ သူ့ကို စဖမ်းတာက ဒီ မေလ နောက်ဆုံးပတ်မှာ ဖမ်းတယ်ပေါ့နော်။ ဒီ တရားရုံးစွဲတင်ပြီး အခုအချိန်ထိ ရုံးချိန် ၈ ချိန်းလောက်မှာ ဒီ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အရွေ့က ဘာမှ မရှိသေးဘူး။ မရှိသေးဘူးဆိုတော့ တရားရုံးက ပြောတာကတော့ မစ္စတာ Danny မပါဘဲနဲ့ တခြား အမှု တမှု ရှိတယ်။ Myanmar Now က လူတွေကို စွဲထားတဲ့ အမှု။ အဲဒီ အမှုမှာ တရားခံပြေးတွေ၊ အဲဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်ရွက်စရာ ရှိတာတွေက ဆောင်ရွက်လို့ မပြီးသေးဘူး။
Danny အမှုကို မစသေးဘူး ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ပြောတယ်။ ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ တကယ်တန်းကျတော့ အမှုက သီးခြားစီ။ Danny အမှုက လုပ်မယ်ဆို လုပ်လို့ ရတဲ့ စပြီးတော့ အရွေ့ ဖြစ်ရမယ့် အနေအထား ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီကြားထဲမှာမှ Covid ကြောင့် အကျဉ်းထောင် ပိတ်တာတွေ၊ ရုံးတွေ ပိတ်တာတွေကြောင့် ဒီအမှုက ပိုပြီးတော့ ကြန့်ကြာသွားတာပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ ဒီ ရုံးချိန် ၈ ချိန်းလောက်မှာ ဘာမှလည်း အရွေ့က ဖြစ်မထားဘူး။ နောက်ထပ် တရားလိုပြ သက်သေကလည်း ၁၃ ယောက်လောက် ရှိတယ်ဆိုတော့ အမှုက ဆက်ပြီးတော့ ကြာနေမယ့် အနေအထား ရှိတယ်။
Danny Fenster ရဲ့ နောက်ထပ် အမှုရုံးချိန်းက အောက်တိုဘာ (၄) ရက်နေ့လို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့လား၊ လူကိုယ်တိုင်လားဆိုတာ သေချာမသိရသေးဘူးလို့ ဦးသန်းဇော်အောင်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
32 kbps | MP3
64 kbps | MP3
16 kbps | MP3
မကွာသငျ့ဘဲ ကွာမွငျ့နတေဲ့ Danny Fenster အမှု (ရှနေ့ဦေးသနျးဇျောအောငျ)
မွနျမာနိုငျငံမှာ ရကျပေါငျး ၁၂၀ ကွာထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ အမရေိကနျသတငျးသမား Danny Fenster ရဲ့ အမှုစဈဆေးမယျ့ကိစ်စ မလိုအပျဘဲ ကွာမွငျ့နပွေီး သူ့ အတှကျ နဈနာမှုတှေ ကွီးကွီးမားမားရှိနတေယျလို့ အကြိုးဆောငျရှနေ့ကေ ဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။
အငျးစိနျအကဉျြးထောငျမှာ ထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ Danny Fenster ကို ဗှီဒီယိုကှနျဖရငျ့နဲ့ တနင်ျလာနကေ့ ရုံးထုတျစဉျမှာ အငျတာနကျဗှီဒီယိုကနေ တှခှေ့ငျ့ရခဲ့တဲ့ ရှနေ့ေ ဦးသနျးဇျောအောငျကို မအငျကွငျးနိုငျက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
စကျတငျဘာလ ၂၀ ရကျနကေ့ အမရေိကနျသတငျးသမား Danny Fenster ရဲ့ ဗှီဒီယို ကှနျဖရငျ့နဲ့ ရုံးခြိနျကို တရားသူကွီးနဲ့ ပနျးပဲတနျး ရဲစခနျး အရာရှိ တို့က အငျတာနကျဗှီဒီယိုတှနေဲ့ အသီးသီးတကျရောကျခဲ့ပမေယျ့ တရားလို ဥပဒအေရာရှိတော့ တကျရောကျတာ မတှရေ့ဘူးလို့ ရှနေ့ေ ဦးသနျးဇျောအောငျက ပွောပါတယျ။ Danny Fenster ကတော့ အငျးစိနျအကဉျြးထောငျထဲကနေ ထောငျအရာရှိတှနေဲ့အတူ ဗှီဒီယိုကှနျဖရငျ့ကနေ တှခေဲ့ပွီး သူနဲ့ စကားပွောခှငျ့ရခဲ့တဲ့အခွအေနကေို ဦးသနျးဇျောအောငျက ဗှီအိုအကေို အခုလိုပွောပါတယျ။
ရှနေ့ဦေးသနျးဇျောအောငျ ။ ။ အဲဒီတော့ Danny Fenster ရဲ့ အခွအေနကေ သူကတော့ မကျြနှာ နညျးနညျးတော့ နှမျးလနြတေယျပေါ့။ နောကျတခါ ဆံပငျကလညျး ရှညျသှားတယျ။ အဲဒါနဲ့ တရားသူကွီးက ရုံးခြိနျ ကိစ်စ ပွောပွီးသှားတော့ ကနြျော သူ့ကို မေးလိုကျတယျ။ မငျး ကာကှယျဆေး ရပွီးပွီလား ဆိုတဲ့ အခါကတြော့ မရဘူးလို့ ပွောတယျ။ ကနြျော သခြောအောငျ နောကျတခါ ထပျမေးတယျ။ ကာကှယျဆေး မရဘူး။ နောကျတခါ သူ နရေ ထိုငျရ မကောငျးဘူး ဆိုတဲ့ဟာ I am not feeling well. ဆိုတဲ့ဟာ ကို သူပွောတယျ။ နောကျပွီးတော့ သူ့အမှု အခွအေနေ ဘာလဲ ဆိုပွီး မေးတဲ့ အခါကတြော့ ကနြျောကတော့ ရှငျးပွတယျ။ အငျးစိနျထောငျကနေ ပိတျထားတယျ အပွငျလူတှေ၊ သူ့အမှုတငျ မကဘူး တခွား လူတှလေညျး ဝငျလို့ မရသေးတဲ့ အတှကျ ဒါတော့ နညျးနညျးလေး ကွနျ့ကွာနတောကို ကနြျော ပွောပွတယျ။
ပွောပွလိုကျတော့ နောကျပိုငျး သူ စိတျပကျြလကျပကျြ ဒီဟာကို သူဘာမှ ထပျမပွောခငျြတော့ဘူး ပေါ့နျော ငါ ဘာစကားမှ ပွောစရာ မရှိတော့ဘူးလို့ သူပွောတယျ။ မနကေ့တော့ အဲလောကျဘဲဗြ။
အငျကွငျးနိုငျ။ ။ သူ့ကို တရားစှဲထားတဲ့ အမှုနဲ့ ပတျသကျလို့ ရှငျးပွပေးနိုငျမလား။
ရှနေ့ဦေးသနျးဇျောအောငျ ။ ။ သူ့ကို တရားစှဲတဲ့ဟာက Myanmar Now က တာဝနျရှိသူ တယောကျ အနနေဲ့ တရားစှဲထားတာဗြ။ ၅၀၅- က နဲ့။ အဲတော့ Myanmar Now က ဖဖေျောဝါရီ ၁ ရကျ နောကျပိုငျးမှာ ရပျဆိုငျးဖို့ ကွညောခဲ့တဲ့ အထဲမှာ Myanmar Now ပါတယျ။ သို့သျော ဒီ Danny Fenster က Myanmar Now မှာ မလုပျတော့တာက အဖမျးမခံရခငျ ၈ လ- ၉ လလောကျ ကတညျးက Myanmar Now ကနေ အလုပျထှကျပွီးသား။ အဲဒီတော့ Frontier Myanmar ကို ပွောငျးလုပျနပွေီ။ အဲဒီတော့ သူ အဖမျးခံရခြိနျမှာ Frontier Myanmar မှာ သူလုပျနတော ၉ လလောကျ ရှိပွီ။ အဲဒီအခြိနျမှာ သူ့ကို တရားစှဲတယျ၊ ဖမျးတယျ။ အဲတော့ တိုငျစာမှာကလညျး Myanmar Now က တာဝနျရှိသူ တယောကျ အနနေဲ့ သူ့ကို ဖမျးတာပေါ့ဗြာ။ မှားပွီး ဖမျးသှားတယျပေါ့။
အငျကွငျးနိုငျ။ ။ အဲတော့ Myanmar Now နဲ့ ပတျသကျလို့ စှဲထားတဲ့ အမှုကို ဘယျလို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိရလဲ။
ရှနေ့ဦေးသနျးဇျောအောငျ ။ ။ ဘယျလို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး သိရမလဲ ဆိုတော့ ဒီအမှု တိုငျစာမှာ ဘယျသတငျးကို ရေးလို့၊ ဘာလို့ ဆိုတာ တခုမှ မပါဘူး။ တိုငျစာမှာက အကဉျြးပွောရရငျတော့ ပွနျကွားရေး ဝနျကွီး ဌာနက ၁/၂၀၂၁ နဲ့ ကွညောထားတဲ့ Myanmar Now သတငျးဌာန ထုတျဝခွေငျး လုပျငနျးကို ပိတျသိမျးခဲ့ပွီး နညျးပညာ ရေးသားထုတျလှငျ့ခွငျး မပွုရနျ ကွညောခဲ့တယျ။
အဲလို ကွညောတဲ့ နောကျပိုငျးမှာ You Tube တှေ Twitter တှနေဲ့ ဆကျသှယျ ဆောငျရှကျတယျ။ CRPH တှေ ဝနျကွီး ဒေါကျတာ ဇျောဝစေိုးတို့ ရပျတညျမှု သတငျးတှေ၊ အဲလို သတငျးတှကေို ထုတျလှငျ့တယျပေါ့ဗြာ။ ပွညျသူ လူထု ထိတျလနျ့စရေနျ ကွံရှယျပွီး ထုတျလှငျ့တယျ။ အဲဒါကွောငျ့ Myanmar Now သတငျး ဌာန တာဝနျရှိသူမြား အပျေါ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ အရ အရေးယူ အမှုဖှငျ့ရနျ တိုငျကွားတာ။ ဒါဘဲ။
အဲဒီတော့ အဓိက သညျ Myanmar Now က တာဝနျရှိသူ အရေးယူဖို့ တိုငျကွားတာ။ Danny သညျ Myanmar Now နဲ့ မပတျသကျခဲ့တာက ၈ လ၊ ၉ လလောကျ ရှိသှားပွီ။ သူ အဖမျးမခံရတဲ့ အခြိနျထိ။ သူက Frontier Myanmar ကို ပွောငျးပွီး အလုပျလုပျနပွေီ။ အဲဒီ အခြိနျမှာ ဖွဈတဲ့ဟာကို မဆိုငျဘဲနဲ့ သူ အရငျတုနျးက လုပျခဲ့တဲ့ အလုပျဌာန အဟောငျးက ဟာကွောငျ့ဆိုပွီး စှဲတာပေါ့နျော။
အငျကွငျးနိုငျ။ ။ Frontier Myanmar သတငျးဌာနမှာ လုပျနတေဲ့ အယျဒီတာတယောကျကို လှနျခဲ့တဲ့ ၉ လ ဆိုတာ စဈအာဏာမသိမျးခငျ အခြိနျတုနျးက Myanmar Now မှာလုပျခဲ့တယျဆိုတဲ့စှဲခကျြနဲ့ ဖမျးဆီးထားတာဆိုတော့ Danny Fenster အတှကျ နဈနာတဲ့သဘောဖွဈမနဘေူးလား။
ရှနေ့ေ ဦးသနျးဇျောအောငျ။။ နဈနာတယျ ဆိုတာကတော့ သူ့ကို စဖမျးတာက ဒီ မလေ နောကျဆုံးပတျမှာ ဖမျးတယျပေါ့နျော။ ဒီ တရားရုံးစှဲတငျပွီး အခုအခြိနျထိ ရုံးခြိနျ ၈ ခြိနျးလောကျမှာ ဒီ တရားစီရငျရေးဆိုငျရာ အရှကေ့ ဘာမှ မရှိသေးဘူး။ မရှိသေးဘူးဆိုတော့ တရားရုံးက ပွောတာကတော့ မစ်စတာ Danny မပါဘဲနဲ့ တခွား အမှု တမှု ရှိတယျ။ Myanmar Now က လူတှကေို စှဲထားတဲ့ အမှု။ အဲဒီ အမှုမှာ တရားခံပွေးတှေ၊ အဲဒီအမှုနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဆောငျရှကျစရာ ရှိတာတှကေ ဆောငျရှကျလို့ မပွီးသေးဘူး။ Danny အမှုကို မစသေးဘူး ဆိုတဲ့ဟာမြိုး ပွောတယျ။
ဆိုတဲ့ အခါကတြော့ တကယျတနျးကတြော့ အမှုက သီးခွားစီ။ Danny အမှုက လုပျမယျဆို လုပျလို့ ရတဲ့ စပွီးတော့ အရှေ့ ဖွဈရမယျ့ အနအေထား ဖွဈနပွေီ။ အဲဒီကွားထဲမှာမှ Covid ကွောငျ့ အကဉျြးထောငျ ပိတျတာတှေ၊ ရုံးတှေ ပိတျတာတှကွေောငျ့ ဒီအမှုက ပိုပွီးတော့ ကွနျ့ကွာသှားတာပေါ့။ နောကျပွီးတော့ ဒီ ရုံးခြိနျ ၈ ခြိနျးလောကျမှာ ဘာမှလညျး အရှကေ့ ဖွဈမထားဘူး။ နောကျထပျ တရားလိုပွ သကျသကေလညျး ၁၃ ယောကျလောကျ ရှိတယျဆိုတော့ အမှုက ဆကျပွီးတော့ ကွာနမေယျ့ အနအေထား ရှိတယျ။
Danny Fenster ရဲ့ နောကျထပျ အမှုရုံးခြိနျးက အောကျတိုဘာ (၄) ရကျနလေို့ သတျမှတျထားပမေယျ့ ဗှီဒီယိုကှနျဖရငျ့နဲ့လား၊ လူကိုယျတိုငျလားဆိုတာ သခြောမသိရသေးဘူးလို့ ဦးသနျးဇျောအောငျက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
ကန်သတင်းသမား Fenster စိတ်ပျက်အားလျော့နေဟန်ရှိ (ရှေ့နေဦးသန်းဇော်အောင်)
မြန်မာသတင်းသမားတွေ ဆက်လက် ဖမ်းဆီးခံရမှုအပေါ် RSF ရှုတ်ချ
သတင်းထောက်တွေ အကြောက်တရားကင်းစွာ လုပ်ကိုင်ခွင့် ကန်သံရုံးတောင်းဆို
အမေရိကန် သတင်းသမား Danny Fenster လွတ်မြောက်ဖို့ မိသားစုမျှော်လင့်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းသမားတွေအပေါ် ဖိနှိပ်မှု RSF သတိပေး
တနင်္ဂနွေနေ့ ဗွီအိုအေ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း (ဇွန်လ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၂၂)
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ငါးလိပ်ကျောက် မဲခေါင်မြစ်မှာ ဖမ်းဆီးရမိ
ဖလော်ရီဒါ မှာ အကြီးဆုံး မြန်မာစပါးအုံးမြွေ မိ
ပွင့်ဖြူ တိုက်ပွဲ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးမက သေဆုံး ( တိုက်ပွဲမှာပါဝင်သူ PDF တပ်သား)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျဉ်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံရမှု ကုလစိုးရိမ်
မြန်မာ့အကျပ်အတည်းကူညီမယ့် ဗျူဟာသစ် ကနေဒါ ထုတ်ပြန်
၂၀၂၂ ဇွန်လ(၂၄)ရက် သောကြာ မနက်ခင်း VOA
ဗွီအိုအေရေဒီယို မနက်ပိုင်း၊ ဇွန် ၂၃ ရက် ၂၀၂၂။
ဗွီအိုအေရေဒီယိုမနက်ခင်း ဂျွန် ၂၆၊၂၀၂၂
ဗွီအိုအေ ရေဒီယိုမနက်ပိုင်း ဇွန် ၂၅၊၂၀၂၂
သန္ဓေသား ဖျက်ချခွင့်ဆိုင်ရာ တရားရုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက် မြန်မာတို့ အမြင်
မျောက်ကျောက်ရောဂါ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေ မဟုတ်သေး (WHO)
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု နိုင်ငံတကာရဲ့ ပြဿနာဖြစ်
၃ ရက်ကြာ G-7 ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲ စတင်
ရုရှားက ရွှေတင်သွင်းမှု G-7 နိုင်ငံတွေ ပိတ်ပင်မည်
ရုရှားက ယူကရိန်းမြို့တော်ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်
ဗွီအိုအေ မိုဘိုင်းလ်အက်ပ်များ ဒေါင်းလုတ်ယူရန်